Kulungiselelwe izintombi uMkhosi woMhlanga | Eyethu News
Merkel in final push for coalition to avert crisis - 38 mins ago
Kulungiselelwe izintombi uMkhosi woMhlanga
Kugqugquzelwe izintombi ukuba zihlolwe.
UNDLUNKULU wakwaNyuswa esigodini saseNkulu uthi ukuhlolwa kwezintombi kuwusiko futhi indlela abafundisa ngayo izingane zamantombazane ukuziphatha.
UNdlunkulu ukusho lokhu ngesikhathi kunomgubho wezintombi kwaNyuswa esigodini saseNkulu ngoMgqibelo emini. “Sizofundisa izingane indlela yokuziphatha futhi lokhu kuwusiko olufanele,” kusho uNdlunkulu. Lomgubho ulandelela omunye umkhosi wamantombazane obusendaweni yasoShabeni emasontweni ambalwa edlule.
Inhloso yalomkhosi bekuwukulungiselela amantombazane njengoba ezoya eMkhosini woMhlanga ngenyanga ka-Septhemba kulonyaka, nokuwafundisa indlela ekumele aziphathe ngayo njengoba beyizintombi.
Kukhulunywe ngokuthi kumele bazithibe ocansini futhi babenenhlonipho bazihloniphe nabo. Enye yezinto ebezigqugquzelwa ukuthi baziqhenye ngemzimba yabo futhi bayithande. Kulomcimbi kuphinde kwanxuswa wonke amaKhosi asakhothama nasaphila ukuthi bavikele izimbali zabo ezizoya eMkhosini omkhulu woMhlanga kulonyaka.
Kukhunjulwe amantombazane aseMzumbe lawa aba sengozini eyisibhicongo yebhasi ngonyaka owedlule ngesikhathi ebuya kwaNongoma. Amantombazane abegcwele kulomcimbi ephuma ezigodini ezahlukene zakwaNyuswa kanti abukeke ekuthokozela lokhu.